လူသားအားလုံးအတွက်: ချစ်သူချော့နည်း (Tag)
Posted by မိုးယံ at 4:01 AM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ရည်းစားမရှိဘူး ဆိုတဲ့အဆိုကို ထောက်ခံရမလိုဖြစ်နေပြီ..။
အပျင်းစား ချော့နည်းတွေရှိတယ် ကိုယ့်လူတို့ရေ...
လောလောဆယ်တော့ :P လိုက်အုံးမယ်...
ဟာ . . မိုးယံက အတော်ကို ချစ်သူများပါလား။ အခု နည်းနည်းလေး ချပြလိုက်တာတောင်မှ ၃ ၄ ယောက်။ တခြားသော ရည်းစားဟောင်းတွေလည်း ရှိသေးတယ် ဆိုပဲ။ မလွယ်ပါလား။
ဇာတ်လမ်းကတော့ အစ အဆုံး အသက်ဝင် နေတာပါပဲလား။ အင်းလေ. . ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်တွေကို ရေးရတာ ဆိုတော့လည်း ထိရှမိပေမပေါ့။ နောက်ထပ် လူတွေကိုလည်း ဖတ်ဖို့ စောင့်နေပါတယ်။
comment ကို ဖတ်လို့၇တယ် ပို့စ်ထဲက စာ ဖတ်မရဘူး
ဘယ်လိုလုပ်ရတာလဲ ပြောပေးပါ တချို့ ဘလော့တွေလဲ ဖတ်မရဘူးးးးး
ဒါက တနည်းပေါ့လေ။ သေချာကို မှတ်သွားပါတယ်အစ်ကိုရေ.။
ဒီစာအုပ်ထဲက နည်းတွေက သိပ်အသုံးဝင်မယ် မထင်ပါဘူးအေ။ :P
အမယ် အမယ် လာသေးတယ် လူဇိုး သူခိုး ဂျပိုးး) ဘာမှရှင်းပြမနေနဲ့ ငါက တကယ်မဟုတ်လို့ အောက်က မှတ်ချက်ရေးတာ မင်းဟာက ပေါ်တင်ကြီး ငရှုပ်မှန်းသိသာတယ် ။ မင်းချော့နည်းလေးတွေက ချစ်စရာ အဲ့လိုလုပ်စမ်းပါ ဟုတ် ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ် ရေးထည့်ပေါ့ ဘာဖြစ်လည်း ။
မဟုတ်ရင်လည်း တကယ်လက်တွေ့မှာ အကောင်ထည်ဖော်နိုင်ပါစေဗျာ ။
သူက ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ...
Your comment has been saved and will be visible after blog owner approval. လုပ်ထားလိုက်သေး
OMG! ၁ယောက် ၂ယောက် ၃ယောက် .. :P
ချော့နည်းကိုတော့ အတုယူဖို့ လေ့လာသွားတယ်
ကံဆိုးတာက အောက်ဆုံးအပိုဒ်တွေက စာလုံးတွေ ရေစိုနေသလား မသိဘူး ၀ါးတားတားနဲ့ ဖတ်မရလို့..။ မျက်မှန်ကလဲ ညက ဖိအိပ်မိလို့ :P
ပြီးတော့ သား အဲဒီနေ့က ကျောင်းမတက်လိုက်ဘူးဆရာ..။:)
မွမွနတ်သာမီး... လာသင်ချင်ပါသော်လည်း စားရိတ်မရှိသေးလို့။
ကိုဇော်....ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ် မဟုတ်ဘူးလေ ကိုကိုဇော်ရယ်..
မဒမ်ငွေ.... ဇော်ဂျီလေး ပြန်အင်စတောလုပ်ရင်အဆင် ပြေမယ်ထင်ပ
မခရစ်စတယ်လ်... အစ်မရယ်.. အဲစာအုပ်တစ်ကယ် မရှိပါ...
မောင်မျိုး...လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူးအေ.. ၀ဲကူးတုန်းက လမ်းညွှန်ချက်တွေ လိုက်လုပ်ထားတာပါ။
မိုးခါး.... တစ်ယောက် နှစ်ယောက် သုံးယောက် တစ်ကယ် ကို ရှိလိုက်ချင်တာ.. ဟီးဟီး
ညီသူအိမ်...နင်က ငါ့ကျိန်စာမတိုက်လို့ မရေးတာလား... ကျိန်စာတိုက်လိုက်ရမလား..
စာလေးရော၊ ကွန်မင့်တွေရော ဖတ်၇တာ တော်တော်ရီရပါတယ်။ စာမေးပွဲလေးပြိးတော့ စာလေးတစ်ပုဒ်ရေးပြိး သူများဆိုဒ်တွေမှာ စာလိုက်ဖတ်နေတာ(ကိုယ့်စာလေးလဲ လာဖတ်မလားလို့ပေါ့) ဒီစာလေးကတော့ တော်တော်အပျင်းပြေပါတယ်။ အေးချမ်းပါစေ။
အခုမှ သိတော့တယ်ဗျာ။ ကိုမိုးယံက အဲလောက်ရှပ်မှန်း လူကြည့်တော့ ရိုးရိုးလေးရယ်။ မထင်ရဘူးဗျာ။
နောက်လည်း အဲလို စာတွေဖတ်ချင်ပါသေးတယ် ။
ေ နဇော် လင်း
ဟုတ်မှာပါလေ စာအုပ်ထဲက အချက်တွေကို ကိုးကားထားတယ်ဆိုတာ...
“ဟင်... ရှင် ရှင်... ရှင်က လှေနံ ကို သုံးဖက်နင်းချင်တယ်ပေါ့..... ဟုတ်လား...... ”
“မဟုတ်ရပါဘူးကွာ... ကိုမိုးကလေ... ဟီးဟီး.. သုံးချောင်းထောက်တာ.. အဲ့ .. ဟုတ်ပေါင် မနေ့ က သုံးချောင်းထောက် ကင်မရာ ၀ယ်ဖို့ လုပ်တော့ ဧပရယ့်ဆိုင်မှာ မရှိလို့ဖြူ့ဆိုင်ကို ၀င်ကြည့်မိတာပါကွယ်”..
“အို.. တော်ပါ.. တော်လိုက်တော့ ရှင့်မျက်နှာလည်း ကျမမကြည့်ချင်ဘူး.. ကျမမျက်နှာလည်း ကျမမကြည့်ချင်ဘူး.... ”
“မျက်နှာမသစ်ခဲ့လို့ လားဟင်... ထားသခင်”..
“ဘာ.. ရှင်... က ဒီလိုတောင် နောက်နေနိုင်တယ်ပေါ့လေ...”.... “ဖျန်း.........................................................................” (ပါးကိုလက်ဝါးနှင်း အပြားလိုက်ရိုက်ချလိုက်သံ... အဟိ.. အားရထှာ)...
ကဲ.. မှတ်ပလား ငါ့ကို ဆွဲထည့်ချင်အုန်း... မှတ်ပလား.. ဒါနဲ့အားမရရင် ထားသခင်ကို ဖိနပ်ပါပေးလိုက်ဦးမယ်... အားရပါးရရိုက်ဖို့ ..
ကဲ... ဘယ့်နှယ့်ရှိစ ကိုရွှေလေအိုး... :)
ပို၍အသက်ဝင်ကြောင်း ..ကြားဖူးတာပဲဗျာ ..
မိုးယံတို့များ ချော့မဲ့ချော့တော့ သုံးယောက်တောင်
ချော့နည်းဗျူဟာ အဖြာဖြာတွေ တော်တော် ကျွမ်းလောက်ပြီ...
ချော့ရလွန်းလို့ ခေါင်းကဆံပင်လဲဖြူလောက်ပြီထင်ပါတယ်း)
ကိုယ့်ချစ်သူစိတ်ကို အလွတ်ရရင် ချော့နည်းကျမ်းကို အလွတ်ရသလိုပါပဲ။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဆိုတော့ ဖတ်ရတာ ရွှင်မြူးပါတယ်။
ကိုယ့်ဆိုဒ်လည်း ကိုယ်ပြန်ချော့အုံး ဝင်ရတာ တအားလေးတယ်။ ထိုင်စောင့်နေရလို့ စိတ်တောင်မရှည်ဘူး။ ညဦးပိုင်းက လာသေးတယ်။ ကြာလွန်းလို့ ပြန်ပိတ်လိုက်ရတယ်။ အဲဒီလို စိတ်မရှည်ဘဲ ပြန်ပြန်ထွက်သွားရတာတွေ များပြီ။ ဘလော့ဂ်တွေကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဝင်ရလွယ်အောင် ဖန်တီးထားရင် အကောင်းဆုံးလို့ ထင်မိပါတယ်။
သင်တန်းတက်ဖို့ ပြင်ထားနော် အကို...:D